Ama-Bounce Rates, Isikhathi Esizeni Nomkhondo Wokulandela | Martech Zone
Ama-Bounce Rates, Isikhathi Esizeni Nomkhondo Wokulandela Indawo
NgoLwesithathu, Okthoba 12, 2011 NgoLwesihlanu, ngoJuni 13, i-2014 Douglas Karr
Kusekhona ukungaqondi okuningi kwe- incazelo yesilinganiso sebhampa, ukuthi lithinta kabi kanjani isiza sakho, nokuthi ungasebenza kanjani ukuthuthuka. Njengoba iningi lenu lisebenzisa iGoogle Analytics, ukuqonda ukuthi iGoogle ikwenza kanjani ukubhoka kubalulekile.
Okokuqala, ungahle ungakuqapheli kepha Isikhathi Esimaphakathi Esizeni kubavakashi abavuthiwe bahlala njalo belingana no-zero. Ngamanye amagama, njengoba ubhekile Isikhathi Esimaphakathi Esizeni, kukhombisa kuphela isikhathi esichithwa kusiza sakho kulabo bavakashi lokho ungabhampi. Lokho kubonakala kungajwayelekile kimi. Ngingathanda ukwazi ukuthi abantu bahlala isikhathi esingakanani ngaphambi kokuba bahlasele ukuze babone ukuthi okungenani ngibabamba yini. Ngeshwa, lokho akunakwenzeka ngaphandle kwama-hacks athile. Zivivinye wena ... isithombe lapha sikhombisa umbiko ohlungiwe wezivakashi ezibhajwe kuphela… okuholela ku Isikhathi Esimaphakathi Esizeni we-0.
Kuyathakazelisa ukuthi, uma isivakashi sakho sixhumana nekhasi lakho ku nganoma iyiphi indlela elandelekayo (ngaphandle kokushiya), ahlukaniswa njengebhampasi! Ngakho… uma ungeza ukulandelwa komcimbi kunkinobho yokudlala noma ekubizelweni esenzweni, futhi umuntu achofoze… azihlukaniswa njengebhampasi. Iningi labantu licabanga ukuthi i-bounce yinoma ngubani owehlele kusayithi lakho abese eshiya. Akusi… yinoma ngubani ohlala kusayithi lakho, angahlanganyeli nganoma iyiphi indlela, bese eshiya.
Uma ulandela imicimbi noma ukubukwa kwamakhasi okwengeziwe ekhasini, lowo muntu ngobuchwepheshe ayizange igxume. Ngakho-ke uma ungumphathi wezokumaketha onenkinga yamazinga aphezulu okubhampa, udinga okungenani ukubona ukuthi izivakashi zisebenzisana nesiza sakho nganoma iyiphi indlela ngaphambi kokuba zihambe. Lokhu kungafezwa ngokungeza ukulandelwa komcimbi yonke indawo lapho kungenzeka khona.
Cabanga ngezinto zekhasi lapho ungakwazi khona Shumeka ukulandelwa komcimbi:
Uma unezixhumanisi ekhasini lakho lokho ukushayela traffic offsite ngamabomu, ungahle ufune ukulandela lowo mcimbi. Kudinga ikhodi encane, kepha, ukuqinisekisa ukuthi umcimbi uyabanjwa ngaphambi kokushiya ikhasi.
Uma une isiza esivunyelwe se-jQuery ngezilawuli zezivakashi ukusebenzisana nezilayida noma ezinye izinto, ungangeza i- jQuery Google Analytics i-plugin eyenza kube lula ukulandela imicimbi emsebenzini.
Enye inketho esezingeni eliphakeme ukufaka ifayili le- yesibili I-akhawunti ye-Google Analytics ekhasini lakho bese ulandelela ukubuka kuqala kwekhasi lesibili ngokushesha lapho ikhasi lilayisha. Lokhu kuzokwehlisa izinga lakho lokushaya libe ngu-0 kuleyo akhawunti kepha kuzokunikeza isikhathi esimaphakathi sezibalo zesiza sazo zonke izivakashi. Ngemuva kwalokho ungangeza ingxenye ngesihlungi esingaphansi kokubukwa kwamakhasi ama-3. Lokho kuzohlunga noma ngubani ngobuchwepheshe ongazange abhampa futhi akunikeze isikhathi kwimininingwane yesayithi.
Futhi ungakhohlwa ithrekhi umkhakha bounce rates ukubona ukuthi isiza sakho siqhathaniswa kanjani. Inothi elilodwa - sijwayele ukubona amasayithi anokuhle kakhulu kokusezingeni lokusesha ngezinga eliphakeme kakhulu. Ukuziphatha kwabavakashi kwalabo abavela ekusesheni bavame ukukhombisa umsebenzi wokuphequlula lapho behlola imiphumela eminingi yosesho bese behamba ngemuva kokuthola isifinyezo esisheshayo sekhasi. Ngakho-ke ungamangali uma uthwebula ithrafikhi yokusesha ethe xaxa futhi izinga lakho lokuncipha lenyuka!
Tags: izinga lokunciphisaukulandelwa komcimbiI-google analyticsisikhathi esizeni
Musa ukwehlisa isiko PR
Ividiyo: I-SmallBox Web Design & Marketing